How much did the state lose in 40 days of lockdown? ~ Canadanepal.net
How much did the state lose in 40 days of lockdown?
कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि गरिएको लक डाउनका ४० दिनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३ खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । यो क्षति वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै १० प्रतिशत हुन आउँछ । व्यापार व्यवसाय, उत्पादन र राजस्व संकलन पूरै प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्य र जनप्रशासन क्षेत्र बाहेक अन्य उत्पादन तथा सेवा लगभग ठप्पप्रायः छन् । यो वर्ष देशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको कुल कारोबारको योग अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३७ खर्ब रहने सरकारी अनुमान छ । यसैलाइ आधार मान्ने हो भने दैनिक उत्पादन १० अर्ब हाराहारी हुन्छ । यस हिसाबले ४० दिनमा ३ खर्बभन्दा बढी क्षतिको आकलन गरिएको हो । यस विषयमा सर्वांगीण विकास केन्द्रले अध्ययन गरिरहेकै छ । अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएका तथ्यहरूका बारेमा केन्द्रका अध्यक्ष एवं अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेसँग हाम्रा सहकर्मी सुदिल पोखरेलले कुराकानी गरेका छन् ।